Idozi ọdịnaya gị nwere ike imebi atụmatụ azụmaahịa gị | Martech Zone
Dịka akụkụ nke atụmatụ ọchụchọ niile, anyị nwere ụlọ ọrụ na-elekwasị anya na nso nso a, ugboro ugboro, na ọdịnaya dị mkpa nke isiokwu ndị nwere ike ịbawanye ogo na ntụgharị. Ide ọtụtụ ederede dị mkpirikpi bụ otu ndụmọdụ ndụmọdụ ahụ anyị hapụrụ n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Enwere ihe ole na ole kpatara ya:
Ihe omimi - search engines n'usoro site ewu ewu na nke ọdịnaya, oge. Ewu ewu na-adabere n'ịdị mma, yabụ na ọ bụghị ihe ịtụnanya na isiokwu siri ike karịrị mkpụrụokwu 1,000 na-eto n'ọkwa. Ọ bụghị okwu ọnụ; ọ bụ nlezianya nke isiokwu ndị na-adọrọ uche, akọrọ n'ịntanetị, ma jikọta ya na saịtị ndị ọzọ dị mkpa. Isiokwu ndị e nyochara nke ọma nke na-eme ka ndị na-ege gị ntị baara uru na-arụ ọrụ dị mma karịa isiokwu ndị na-emighị emi.
Ihe ntughari - mgbe ọ bụ a akụkọ ifo nke na-eme ka ọdịnaya mepụta mepụta ntaramahụhụ, enwere ọghọm ide ugboro ugboro banyere otu isiokwu… ị nwere peeji dị n'ime ya nke na-asọ mpi maka otu mkpụrụokwu ahụ. Kama ide edemede otu ọnwa na isiokwu enyere, ịde ma ọ bụ imelite isiokwu nyocha kpamkpam na nke zuru oke ga-ahụ na ndị na-ege gị ntị na ndị na-enyocha ọchụchọ na-elebara peeji ahụ anya.
Ndị na-ege ntị na-elekwasị anya - ide ihe banyere ụlọ ọrụ gị na ọrụ ya ugboro ugboro anaghị enyere azụmahịa gị aka iwulite ikike na ntụkwasị obi n'etiti ndị na - ege gị ntị. Chee echiche banyere ya… gị Elekwasị anya dị n’elu gị kama ịdị na-ege ndị na-ege gị ntị. Ọ bụrụ na ịchọrọ igosi na ị bụ onye ikike na atụmanya gị tụkwasịrị obi, atụmanya gị kwesịrị ịmara na ị bụ ọkachamara na ha ọrụ, ọ bụghị nke gị.
Ka anyi chee na m na emepe atumatu ọdịnaya maka nyiwe ahia email abuo, Companylọ ọrụ A na Companylọ ọrụ B.
Alọ ọrụ A - Ọdịnaya na-akọwa ngwaahịa, njirimara, njikọta na ọnụego ha n'elu ikpo okwu. Kwa ụbọchị, ha na-emepụta blọọgụ na nnabata spam, atụmatụ, akụkọ ihe ịga nke ọma nke ndị ahịa, na usoro ụlọ ọrụ. Ọdịnaya ahụ gbadoro anya na email, email, email, na email.
Blọ ọrụ B - Ọdịnaya lekwasịrị anya ndị na-ege ntị na ozi ha na acho. Ndị na-eme mkpebi na-azụta ikpo okwu ahịa email nwere ọtụtụ ọdịmma na nsogbu na ọrụ ha. Ndu ndu, nchịkọta, budgeting, ego, ule, arụpụtaghị, ochichi, ude… ọrụ nke email ahịa ọkachamara nwere ọtụtụ akụkụ. Ọzọkwa, onye isi ọrụ nwere ike iwepụ obere oge ma ọ bụ ọbụdị na-arụ ọrụ na ikpo okwu karịa ndị ọrụ ha na - - ya mere ha enweghị mmasị na nkọwa zuru oke.
Ejiri m ahịa email dị ka isi ihe atụ n'ihi na nke ahụ bụ ahụmịhe m na ExactTarget. Dị ka onye njikwa ngwaahịa na onye na-ahụ maka njikọta, etinyekwuru m uche na ngwaahịa anyị yana ihe ọ nyefere. Agbanyeghị, ana m elekarị anya ka ndị isi na-ere ihe ike ga-ekwe omume nye ụlọ ọrụ kachasị ukwuu ma ọ bụrụ na ha esoro anyị. N'ezie, ọtụtụ n'ime nkwekọrịta anyị dị oke mkpa chọrọ nhazi nke na-adịtụbeghị n'elu ikpo okwu… ma ntakịrị nke mmepe ahụ emefuola ihe ngwọta nke ụlọ mgbe nkwekọrịta ahụ bịanyere aka.
Ndị ọzọ okwu, ọ bụghị ngwaahịa, atụmatụ, ma ọ bụ ọrụ na-eresị na njikọ aka… ọ bụ ohere e rere. Ọchịchị ndị isi gosipụtara na ha ghọtara azụmahịa nke atụmanya ahụ nke ọma na ha nwere ike inyere ha aka imeri nsogbu ha ma mepụta ihe ọhụrụ karịa ndị ọ bụla na-asọmpi.
Ndị ụlọ ọrụ na-etolite ọdịnaya nke na-elekwasị anya na ngwaahịa na ọrụ ha anaghị etinye aka na ndị na-eme mkpebi. Mgbe ị lekwasịrị anya na ozi dabere na ndị na-ege ntị karịa ụlọ ọrụ ahụ, ị ​​ga-ahụ karịa ịkekọrịta, njikọ ndị ọzọ, mkparịta ụka ndị ọzọ, na mgbanwe ndị ọzọ. Mgbe ọ dị warara, a na-ahụkarị ya ka ọ na-asọ ma na-eleghara ya anya dị ka ihe nnochi anya ahịa.
Ọ bụrụ na ị dee maka gị ndị na-ege ntị ma dọpụta ha na saịtị gị site na nghọta gị banyere nsogbu ha, ị ga-enyekwu uru maka atụmanya gị na ndị ahịa gị. Ebumnuche nke ọdịnaya gị kwesịrị ịbụ gị gosi ndị na-ege gị ntị na ị ghọtara ihe ịma aka ha ma nwee ngwọta ga-enyere ha aka iru ikike ha. Mgbe ha hụrụ na ị bụ onye ikike n’ọrụ ha, ha ga-atụkwasị gị obi na ngwa ahịa gị.
Nke a bụ Ọbá akwụkwọ ọdịnaya ị kwesịrị ilekwasị anya na ụlọ.
Tags: ikikeikike ọdịnayailekwasị anya na ọdịnayaỌbá akwụkwọ ọdịnayacontent Marketingnyocha ọdịnayaọdịnaya abụọElekwasị anyannyocha nyocharesearchnnukwu ọdịnayatụkwasị obi
Aug 25, 2017 na 1: 45 AM
Blọ ọrụ B ihe atụ bụ ụdị ụlọ ọrụ ga-adọta anyị ka anyị lelee ma zụta ngwaahịa ha. Ozi bara uru, akụkọ, eziokwu, ndụmọdụ na ihe atụ bụ ihe na-eme ka ọdịnaya baa uru.
Mana kwa, ị ga-etinye ọdịnaya a mbụ site na ndị na-ege gị ntị wee nọrọ na ebe kwesịrị ekwesị n'oge kwesịrị ekwesị.Social Media na-arụ nnukwu ọrụ ebe a. I mee nke a, ha ga - achọta gị n ’ọfụma n’ onwe ha ma emechaa.
Aug 25, 2017 na 1: 51 AM
Blọ ọrụ B bụ ụdị ụlọ ọrụ ga-adọta anyị iji ngwaahịa ha, n'ezie.
Eziokwu, ihe atụ, akụrụngwa, idozi nsogbu yana ozi bara uru bụ ihe na-eme ka ọdịnaya baa uru.
Ọzọkwa, ị ga-ekerịta ọdịnaya gị na ebe kwesịrị ekwesị, n'oge kwesịrị ekwesị ma tinye ya n'ihu ndị na-ege gị ntị. Ha ga-ama ebe ha ga-achọta gị ma emesịa chọta ha na mbụ wee nye ha ọdịnaya bara uru.